अर्थ वाणिज्य Archives - Page 14 of 16 - Namaste Times
बिहिबार, चैत्र ०७, २०७५ | Thursday, June 15, 2017
शिक्षाको बजेट स्थानीय तहमैत्री नभएको गुनाशो
१ असार, काठमाडौं । स्थानीय तहलाई शिक्षाको जिम्मेवारी अनुसारको वजेट विनियोजन नगरिएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । संविधानले विद्यालय शिक्षासम्मको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएपनि शिक्षक तलब र छात्रवृत्तिलगायतको बजेट मात्रै पठाइएको प्रति उनीहरुको विमति थियो । शिक्षा पत्रकार समूहले बिहीवार आयोजना गरेको ‘शिक्षा वजेट र कार्यान्वयन’ विषयक अन्तरकृयामा बोल्ने अधिकाँश वक्ताहरुले स्थानीय त...
IME ले स्थापनाको १७औं वाषिर्कोत्सव मनायो
काठमाडौं । नेपालको नम्बर १ रेमिटेन्स कम्पनी आईएमईले आफ्नो स्थापनाको १७औं वाषिर्कोत्सव ‘१७ औं वाषिर्कोत्सव नयाँ प्रविधिको’ भन्ने मूलनाराका साथ विविध कार्यक्रमको आयोजना गर्दै मनायो । वाषिर्कोत्सव समारोहमा आईएमई लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक हेमराज ढकाल र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुमन पोखरेलले शुभकामना व्यक्त गरेका थिए भने अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको उपाध्यक्ष एवम् रोजगारदा...
नेताले जे भनुन्, बिजुली निकाल्नुपर्छ – गोरखाबासी भन्छन् ( बुढीगण्डकी )
गोरखा । सरकारले बुढीगण्डकी आयोजना चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुप अफ कम्पनी लिमिटेडलाई दिने निर्णय गरेको २० दिन बित्न नपाउँदै चीनबाट आएको एक टोली गोरखा पुगेको छ । चिनियाँ टोली आयोजना स्थलमा पुगेकै बेला हामीले केही स्थानीयवासीहरुसँग उनीहरुका धारणा बुझ्ने प्रयास गर्‍यौं: डा. बाबुराम भट्टराई गृहजिल्लाबासीहरुले यो आयोजना बन्नुपर्ने बताए । सोमबार बुढीगण्डकी विकास समितिमा मुआब्जाको निवेदन दिन आए...
के होला कतारको अर्थतन्त्र ?
दुबई : कतार एयरवेजले आफुलाई बिगतका केही वर्षदेखिको गल्फ क्षेत्रको एक प्रमुख हवाई सेवाका रुपमा विकास गरिरहेको छ । र यसले कतारको राजधानी दोहालाई एक प्रमुख ट्रान्जिट बनाउने गरेको छ । लगभग विश्वकै एक प्रमुख ट्रान्जिटका रुपमा रहेको दोहा शहरको यो ट्रान्जिट आकर्षणले पछिल्लो समयमा गल्फमा देखा परिरहेको सङ्कटका कारण निरन्तरता पाउलाजस्तो देखिँदैन । गल्फलाई कतार एयरलाइन्सले मात्र नभएर गल्फका अरु देशका राष्...
हिन्दु तथा बौद्ध धर्मावलम्बीहरुको पवित्र तीर्थस्थल मानसरोबरजाने , हवाइजहाज र हेलिकप्टरलाई भ्याइनभ्याई
हुम्ला । हिन्दु तथा बौद्ध धर्मावलम्बीहरुको पवित्र तीर्थस्थल मानसरोबर तथा कैलाश जाने तीर्थयात्री बढेपछि हुम्लामा हवाइजहाज तथा हेलिकप्टरलाई यात्रु ओसार्न भ्याइनभ्याई भएको छ । मानसरोबर तथा कैलाश जाने प्रमुख मार्ग तातोपानी नाका र रसुवा नाका बन्द भएपछि हुम्लाको सिमिकोट हुँदै हिल्सा नाकामा तीर्थयात्रीको चाप बढेको हो । गत वर्ष ९ हजार ६ सय तीर्थयात्रु कैलाश तथा मानसरोबर पुगेकोमा यो वर्ष त्यसको द...
हेर्नुहोस् पछिल्ला ६ अर्थमन्त्रीको मन्त्रालय नसुहाउँदो बायोडाटा !
काठमाडौँ : नेपालको अर्थतन्त्रमा खास सुधार भएन भन्ने हो भने यसपालीको आर्थिक वृद्धिदरले त्यसलाई गलत पुष्टि गरेको छ । तर दर वा अंकमा देखिएको वृद्धिदरले खासै जनातालाई छुन भने सकेको छैन । आखिर किन यस्तो भयो होला ? यो प्रश्नको थुप्रै उत्तरहरु छन् । थुप्रै उत्तरहरुमध्ये नेपाल सरकारले पाएका अर्थमन्त्री कस्ता थिए भन्नेपनि हो । नेपालको इतिहासमा केहि अब्बल अर्थमन्त्रीपनि थिए । तर पछिल्ला ६ अर्थमन्त्रीलाई हेर...
साझा बस पनि अछुतो रहन सकेन, यात्रुसँग धेरै भाडा उठायो, भेटियो प्रमाण
काठमाडौं : सरकार र आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको संयुक्त अनुगमन टोलीले उपत्यकाको विभिन्न ठाउँमा सञ्चालन हुने ५८ वटा यातायातका साधनको अनुगमन गरिएकोमा साझा यातायातसहितका ३६ वटाले तोकिएको भन्दा बढी भाडा लिएको पाइएको जानकारी गराएको छ। अनुगमन टोलीले तोकिएको भन्दा बढी भाडा लिने सवारीचालकलाई पाँच हजार जरिवानासहित तोकिएको भन्दा बढी लिइएको भाडा फिर्ता दिन लगाइएको विभागका प्रवक्ता ए...